Iye zvino yave kuwanikwa kuyedza iyo itsva OpenMandriva Lx 4 beta | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva OpenMandriva Lx 4 beta yave kuwanikwa kuyedza
OpenMandriva Lx iko kugoverwa kweLinux kwakagadzirwa uye kutungamirwa kune ese marudzi evashandisi. Iyo purojekiti iri kuvandudzwa nemauto enharaunda mushure mekunge Mandriva SA yaendesa manejimendi eprojekti kune isingabatsiri OpenMandriva Association.
Kune avo vanhu vasingazive zita raMandriva Linux ini ndinogona kutaura pane zvinotevera pamusoro pekuparadzirwa kweLinux kwakagumisa kukura kwayo makore akati wandei apfuura.
Mandriva Linux yaive Linux kugovera kwakaburitswa nekambani yeFrance Mandriva inoitirwa vese vanotanga uye vashandisi vane ruzivo.
Nguva yakafamba uye iyo nguva yakasvika payakange isingakwanise kuchengetedza budiriro zvekugovera saka kupera kwadzo kwakauya.
Tichifunga izvi, OpenMandriva Lx yakasimuka, ichitora chirongwa ichi, asi pamagariro ayo Uye ndokutanga mabudiro ekuparadzirwa uku.
Kwemakore Kuvandudzwa kweOpenMandriva Lx kwave kunonoka kutaura, asi izvi hazviregeredze kuedza kukuru kwekuenderera nazvo.
Kunyange zvakadaro OpenMandriva Lx haina kunyanya kufarirwa, ine nharaunda hombe yevashandisi uye vanogadzira vanochengetedza chirongwa ichi.
1 Nezve iyo nyowani OpenMandriva Lx 4 beta
2 Main makuru maficha eOpenMandriva Lx 4
3 Dhawunirodha uye edza OpenMandriva Lx 4
Nezve iyo nyowani OpenMandriva Lx 4 beta
Bazi OpenMandriva Lx 4 inozivikanwa neshanduko kune iyo RPMv4 package maneja, iyo DNF koni yekushandisa uye graphical interface yekugadzirisa iyo Dnfdragora mapakeji.
Pakutanga, chirongwa chakashandisa rakaparadzaniswa bazi reRPMv5, urpmi toolkit, uye rpmdrake graphical user interface.
RPMv4 inotsigirwa neRed Hat uye inoshandiswa nekuparadzirwa kwakadai seFedora, RHEL, openSUSE, uye SUSE.
RPMv5 bazi rakagadzirwa nevanofarira vekunze uye rave rakamira kwemakore mazhinji, yazvino vhezheni yakagadzika yeRPMv5.
Iyo yakaumbwa muna 2010, mushure meizvozvo budiriro yakamiswa. Kusiyana neRPMv5, iyo RPMv4 chirongwa chinogadziridzwa uye nekuchengetedzwa, uye zvakare inopa yakazara yakazara seti yezvishandiso yekugadzirisa mapakeji uye zvinyorwa.
Kuchinjira kuRPMv4 kuchabvisawo yakasviba hacks uye anobatsira Perl zvinyorwa parizvino zvinoshandiswa muOpenMandriva.
Main makuru maficha eOpenMandriva Lx 4
Mune ino nyowani kuvaka kweOpenMandriva Lx 4 tinogona kuona kuti Clang compiler yakashandiswa kuumba mapakeji yakagadziridzwa kuLLVM 7.0 bazi. Yakagadziridzwa Linux kernel shanduro 4.20.4 uye Systemd 240.
Iyo graphical stack uye vashandisi vamiririri yakagadziridzwa: KDE Plasma 5.14.90, KDE Zvimiro 5.54.0, KDE Kunyorera: 12/18/1, Qt 5.12, Xorg 1.20.3, Mesa 18.3.3, LibreOffice 6.2, Firefox 65.0, Krita 4.1.7.101, DigiKam 6.0.
Kune mushandisi manejimendi, panzvimbo ye userdrake, iyo Kuser interface inoshandiswa, uye nekugadzira ekuchengetedza makopi, panzvimbo yedraksnapshot, KBackup inokurudzirwa.
Kuzivisa mushandisi nezvekuwanikwa kwemapakeji ekuvandudza, iyo applet "Plasma Software Updates" inosanganisirwa.
MuMenyu yekuRarama-nharaunda bhuti menyu, zvinhu zvakawedzerwa pakusarudzwa kwemitauro uye dhizaini yekhibhodi.
Iko iko kwekutanga kwemufananidzo mupenyu kunosanganisira KPatience kadhi mutambo.
Kune rimwe divi, tinogona kuzviona iyo squid simaki yakagadziridzwa mune iyi nyowani vhezheni.
Izvi zvinowedzera imwe sarudzo yekumisikidza chinja chikamu. Kuchengetedza iyo yekumisikidza maitiro log inoitwa pane yakabudirira kuiswa system.
Mushure mekumisikidza kwapera, mapakeji emitauro asingadiwe asingaenderane nemitauro yakasarudzwa achabviswa.
Kuwedzera cheki yekuisirwa muVirtualBox nharaunda: kana chaiyo hardware ikashandiswa, kubviswa kwemapakeji ekutsigira eVirtualBox kupihwa
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti shanduro dzakatanga kugadzirirwa aarch64 (Raspberry Pi 3 uye DragonBoard 410c) uye armv7hnl zvivakwa.
Dhawunirodha uye edza OpenMandriva Lx 4
Kana iwe uchifarira kuyedza iyi nyowani beta vhezheni, unogona kuwana iyo nyowani mufananidzo weiyo beta vhezheni yeOpenMandriva Lx 4.
Unongofanira kuenda ku yayo yepamutemo webhusaiti kwaunowana iyo 2.1 GB live kuvaka (x86_64) inowanikwa kurodha pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo itsva OpenMandriva Lx 4 beta yave kuwanikwa kuyedza
Uye Mandriva ndinofunga akazvarwa kubva kuMandrake + Conectiva?
Handizive kana ndiri kutaura chokwadi, ndidzo ndangariro dzekare.
Wedzera purindaini yeinternet muGNU / Linux
GreenWithEnvy - NVIDIA GPU Kuwedzeredza Software